Ukuvimbela ukusetshenziswa kabi kwemithi kadokotela - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo Inkampani, Izindaba Cindezela Izindaba Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani Izindaba, Wellness Inkampani, Imfundo Yezempilo Izidakamizwa Vs. Umngani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ukuvimbela ukusetshenziswa kabi kwemithi kadokotela
Abazali bahlala befuna izingozi ezicashile ezimpilweni zabo zentsha, kodwa i-radar yabazali ingaphuthelwa kalula ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kadokotela.
Imibhalo iyafinyeleleka futhi isatshalaliswa kabanzi. Ukuba nebhodlela kadokotela akuvamisile ukusola indlela izesekeli zezidakamizwa ezingekho emthethweni ebezingaba ngayo, ngakho-ke kulula ukugcina ukusetshenziswa kabi kadokotela kufihliwe. Futhi ngoba imiyalo inenani lokwelashwa nokwelashwa ekunakekelweni kwezempilo, le mithi ayibonakali iyingozi.
Lo mhlahlandlela uzokunikeza indawo yokuqala yezingxoxo ezintsha nengane yakho, imibono yocwaningo oluqhubekayo, namathiphu wokuthi ungazigcina kanjani izingane zakho ziphephile ekusebenziseni kabi kadokotela.
Izingozi zokusebenzisa kabi imishanguzo nemithi oyithenga
Imithi ayinabo ubungozi, noma ngabe ithathwa ngaphansi kweso lomhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo. Kukhona izingozi, kepha zithuthukiswa uchwepheshe ngokuhlola ngokucophelela umthamo, ukuqapha imiphumela yezidakamizwa emzimbeni, nokwenza izivivinyo ukwenza isiqiniseko sokuthi umuthi awenzi umonakalo.
Akunjalo ngentsha esebenzisa kabi izidakamizwa. Abanawo udokotela abangaphendukela kuye uma kukhona okungahambi kahle.
Izimpawu zokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kadokotela zingacashile. Abazali nabantu abadala abathembekile bangasiza intsha yabo ngokwazi izimpawu nezimpawu zomzimba zokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kadokotela.
Izimpawu nezimpawu zokusebenzisa kabi izidakamizwa
Uma ingane yakho isebenzisa kabi imiyalo, ungabona izinguquko ekuziphatheni.
Ukunyamalala ebusuku kakhulu
Thulula amabhodlela emithi kudoti
Ukuvakasha okwengeziwe kodokotela noma uhambo oluya ekhemisi, ukuvuselelwa kwasekuqaleni kwemithi enqunyiwe, noma ukulahlekelwa yimithi kadokotela (okungaba izaba zokuthola ukugcwaliswa okwengeziwe)
Izinguquko zokulala noma zokudla
Ukwehla kwesisindo okungazelelwe noma ukuzuza kwesisindo
Izimpawu zokuhoxa okungahle kwenzeke njengokujuluka, ukuzwa ukugcwala, nokuba nabafundi abahlanzekile
Ukusetshenziswa kwe-opioid: Ukulala, ukuqunjelwa, ukuntuleka kokuxhumana, ukuphefumula kancane
Ukusetshenziswa okukhuthazayo: Ukuqwasha, umfutho wegazi ophakeme, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, ukushisa komzimba okuphezulu
Ukusetshenziswa kwemithi yokuthambisa neyokulwa nokukhathazeka: Isizunguzane, ukuhamba okungalingani noma okungazinzile, ukulala, ukuphefumula kancane
Ukushintsha kwemizwelo ngokweqile
Ukusetshenziswa kwe-opioid: i-Euphoria noma ukuzizwa uphakeme, ukudideka kwengqondo, izinguquko ekuzweleni kobuhlungu
Ukusetshenziswa okukhuthazayo: I-Euphoria, ukungahlaliseki, ingqondo esebenza ngokweqile, i-paranoia, ukukhathazeka, ukuqapha okungavamile
Ukusetshenziswa kwemithi yokuthambisa neyokulwa nokukhathazeka: Ukuncipha kokuhlushwa, ukudideka kwengqondo, izinkinga zememori, ukukhuluma okungaqondakali
Wonke umuntu wehlukile, ngakho ingane yakho kungenzeka ingakhombisi zonke izimpawu.
Ezinye izimpawu zingenzeka, ngakho-ke bukela noma yini engavamile.
Enye intsha iyakwazi ukufihla ezimbalwa noma zonke izimpawu zayo.
Khumbula ukuthi kungaba futhi nesizathu esisemthethweni sezokwelapha esingahlobene nokusetshenziswa kwezidakamizwa (isibonelo, isiyezi naso isibonakaliso esivamile sokuba nesimo senhliziyo).
Uma ubona noma yiziphi zalezi zimpawu nezimpawu enganeni yakho, kubalulekile ukuthi ungethuki. Lolu hlu luyisiqondiso sezimpawu zokuxwayisa, hhayi ukuxilongwa okucacile. Noma ngabe ingane yakho kuyinto empeleni esebenzisa kabi izidakamizwa, udinga ukuthi ube ngumuntu omdala onokwethenjelwa nonakekelayo onganikeza iqiniso ngemithi kadokotela kanye nezingozi ezingaba khona zokusebenzisa kabi imishanguzo kadokotela.
Ukuthi abazali bangasiza kanjani ekuvimbeleni ukusetshenziswa kabi kwemithi yentsha: Izikripthi zabazali, zothisha nabeluleki
Intsha iyabalalela abantu abadala ebazungezile futhi ungaba nomthelela — izibalo zikufakazela lokho. Izingane zinjalo Ama-50% mancane amathuba okuthi basebenzise izidakamizwa lapho abazali babo bexoxa njalo ngezingozi nabo . Imvamisa, intsha inengqondo kakhulu kunalokho ebesikulindele futhi iyalamukela ithonya elihle noma lingakubonisi ngaphandle.
Ngeshwa, ubufakazi bukhombisa ukuthi abazali abaningi abanazo lezi zingxoxo nezingane zabo. Kuphela Intsha engama-22% ibika ukuthi ixoxa nabazali bayo ngobungozi bemithi kadokotela .
Iqiniso ukuthi, abantu abasha babhekile futhi balalele okushiwo ngabantu abadala ababazungezile. Ngoba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kadokotela kaningi kuyindlela enganakwa yokusebenzisa kabi imithi, cishe umuntu oyedwa kwabane kwentsha ukholwa ukuthi abazali babo bebengeke bakhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kabi kadokotela.
Isikhali sakho esinamandla kakhulu sokulwa nokusetshenziswa kabi kadokotela kungenzeka ukuthi siqala ingxoxo nezingane zakho.
Izikripthi zokukhuluma ngokusetshenziswa kabi kwemithi kadokotela
Ukusebenzisa izimo empilweni yansuku zonke ukuqala izingxoxo nengane yakho isu elilodwa. Nazi izindlela ezimbalwa.
bangaki abantu abathola umkhuhlane kithi
Uthatha incwadi kadokotela
Ingane esikoleni ingena enkingeni yokusebenzisa kabi imishanguzo
Imibiko yezindaba zendawo ngokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kadokotela
Njengoba uqala ukukhuluma nentsha ngokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, babuze umbono wabo ngezidakamizwa, bese uxoxa izingxoxo mayelana nokusetshenziswa kwezidakamizwa kadokotela ezingxoxweni ezibanzi mayelana nokuphila impilo enempilo.
Ukwabelana ngamaqiniso ngesikole, imisebenzi, nezidakamizwa
Abantu abadala abanethonya bangahlinzeka ngemfundo ngemithi ngenkathi behlose izinganekwane intsha engakholelwa kuzo. Noma ngabe intsha ikhathazekile ngemiphumela engemihle noma ezinye izingozi, ingacabanga ukuthi izinzuzo zidlula izingozi; mhlawumbe ngoba abaziqondi izingozi.
Abazali badlala indima ebalulekile ekwabelaneni ngamaqiniso ngemithi kadokotela, futhi kunezinto ezimbalwa ezibalulekile izingane ezidinga ukuzazi.
Iqiniso: Imithi onayo ingalutha njengezidakamizwa ezingekho emthethweni
Iphuzu lokukhuluma: Abantu abaningi abazi ukuthi imishanguzo kadokotela ingalutha kanjani. Kwesinye isikhathi balutha kakhulu kunezidakamizwa ezingekho emthethweni.
Izidakamizwa ezingekho emthethweni akuzona ukuphela kwesenzo edolobheni uma kukhulunywa ngokulutha. Noma kunjalo I-27% yentsha cabanga ukuthi imiyalelo kadokotela ayiluthisi njengezidakamizwa zasemgwaqweni. Ngokudabukisayo, inkolelo yokuthi ukusebenzisa kabi imishanguzo iphephile nayo yabiwa ngabazali abayi-16%.
Iqiniso: Imithi kadokotela ayiphephile ngokwemvelo
Iphuzu lokukhuluma: Imiyalo inikezwa odokotela, abahlola umthamo wakho ukuze baqiniseke ukuthi ikulungele. Noma imuphi umuthi ungalindeleka noma ube nemiphumela engahlosiwe noma ngabe wawusebenzisa phambilini. Yingakho kungafanele uthathe incwadi kadokotela ngaphandle kokuthi ibhalelwe wena.
Ngezingane zakho, kubalulekile ukugcizelela amandla emithi ukuthi abe lusizo futhi abe yingozi. Imithi kadokotela ayiphephile kumuntu ngamunye, yingakho odokotela, abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo, kanye nosokhemisi benza ukuhlolwa okugcwele kwemilando yezempilo yesiguli ngaphambi kokuhambisa imithi.
Ngisho nemithi ethengiswayo inemiphumela engemihle. Yazisa ingane yakho ukuthi le miphumela emibi ingalindeleka, futhi ingahle ibonakale ngokuhamba kwesikhathi uma ingenzeki ngemuva komthamo wokuqala. Ukuthatha imithi umzimba wakho ongayidingi kwandisa amathuba okuthi umzimba wakho ungalimala.
Yazisa ingane yakho ngezingozi zokusebenzisa kabi kadokotela.
Ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile
Umsebenzi wobuchopho owenziwe kancane nokucabanga
Izinguquko ekushiseni komzimba zibe yingozi ephakeme kanye naphansi
Ukuhluleka kwenhliziyo, izinso, noma isibindi
Ukwanda kwamathuba okufa noma ukulimala kanzima
Umsebenzi ophuthelwe, isikole, nemisebenzi yomuntu siqu
Iqiniso: Izidakamizwa ngeke zikusize wenze kangcono esikoleni
Iphuzu lokukhuluma: Ukusebenzisa kabi imishanguzo kadokotela akuyona indlela ephephile yokwenza ngcono kwezemidlalo noma esikoleni. Uma ungenayo i-ADHD, ukuthatha i-Adderall (noma umuthi ofanayo) ngeke kusize ngoba le mithi ayenzelwe ukukhulisa ubuchopho. Zenzelwe ukwelapha i-ADHD.
Akuwona wonke umuntu osebenzisa kabi izidakamizwa ukuze aphakame. Ngisho intsha enonembeza, esebenza kanzima ingakholelwa ukuthi kunezinzuzo ekusetshenzisweni kwezidakamizwa kadokotela okungagunyaziwe.
Ukukhuluma nengane yakho uma usola ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa
Uma usola ukuthi ingane yakho isivele isebenzisa kabi imiyalo, ungaphenduli ngaphandle kohlelo olucacile. Lokhu kuzokusiza ukubhekana nengane yakho ngokuphepha:
Linda kuze kube yisikhathi esifanele. Ungazami ukukhuluma nentsha yakho ize isanguluke. Uma bephezulu, bedakiwe, noma ngenye indlela bengaphansi kwethonya, linda kuze kube kamuva ukuze ube nengxoxo.
Ungacaci. Tshela ingane yakho ukuthi kungani ukhathazekile ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uthole ibhodlela elingenalutho? Ngabe umbonile ethatha amaphilisi amabili esikhundleni salesi ebesibekiwe? Esikhundleni sokuthi, ngiyazi ukuthi usebenzisa izidakamizwa! Ithi, ngikhathazekile ngoba ngikubonile udla amaphilisi amathathu ngasikhathi sinye, okungaphephile. Ngabe konke kuhamba kahle?
Hlala uzolile. Gwema ukusabela ngamandla futhi ucasule ingane yakho. Hlala uzolile ngangokunokwenzeka futhi unamathele emaqinisweni. Ingane yakho ingathukuthela futhi isabele ngokuqinile, kepha ufuna ukuhlala ulawula ukusabela kwakho.
Yabelana ngemibono yakho. Bazise ukuthi uzizwa kanjani ngokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa futhi ukhumbuze izingane zakho ukuthi uyazithanda futhi ufuna ukusekela.
Thola usizo. Uma udinga isipele, zama ukukhuluma nomeluleki wesikole noma umhlengikazi ngokuthi ungayisiza kanjani ingane yakho. Kwezinye izimo, ukubamba iqhaza kwentsha yakho ohlelweni lokuvuselela kungadingeka ukuze uthole ukululama okugcwele.
Uma kungenzeka, gcizelela ukubaluleka kokuphila impilo enempilo nokusebenzisa imithi ngendlela efanele.
Ukuvimbela ukusetshenziswa kabi kwemithi yentsha: Imibono yabeluleki nothisha
Njengomeluleki noma uthisha, ungeke ukwazi ukuvimbela ngqo ukufinyelela kwentsha emithini kadokotela ekhaya, kepha ungagcizelela ubungozi bokusebenzisa kabi imithi ehloselwe abanye abantu.
Enye intsha ingadinga ukuzwa imfundo enembile ngezidakamizwa ezivela emithonjeni engaphezu kweyodwa nakubantu ngaphandle kwabazali bayo. Othisha nabeluleki bangasebenza njengomthombo omuhle, ongewona umzali walezi zingane. Kulo mhlahlandlela, uzothola amaphuzu okukhuluma nezibalo.
Ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokuqhathaniswa nokusebenzisa kabi izidakamizwa
Kunomehluko phakathi kokusebenzisa kabi izidakamizwa, ukuluthwa yizidakamizwa, nokuxhashazwa. Lesi yisihloko esiyinkimbinkimbi nezizathu zokusebenzisa kabi izidakamizwa zingaxaka. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izici zokushayela ngemuva kokusebenzisa umuthi ngokungafanele futhi nokuba nomlutha otholakele azifani.
Ukusetshenziswa kabi kadokotela, njengakho konke ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, kungahle noma kungabi yingxenye yokulutha.
Ukusetshenziswa kabi komuthi: Ngokubanzi, ukusebenzisa kabi ukusebenzisa imishanguzo kadokotela ngaphandle kokuyisebenzisa. Lokhu kungabandakanya ukuthatha umuthi kadokotela womunye umuntu, usebenzisa ngamabomu umthamo omkhulu ukwedlula isincomo somhlinzeki esimiselayo, noma ukusebenzisa incwadi yakho kadokotela ngenjongo engahloselwe umhlinzeki.
Umlutha kadokotela: Isifo esingaxilongwa, esiyinkimbinkimbi esithinta umzimba wonke futhi sidale izinguquko ngaphakathi ebuchosheni. Ukulutha kwezidakamizwa kuchazwa emtholampilo njengokuphazamiseka kokusebenzisa izidakamizwa (i-DUD).
Uma ingane yakho isebenzisa kabi imishanguzo, akusho ukuthi ingane yakho ihlangabezana nenqubo yezokwelapha yokulutha. Umlutha ungatholwa kuphela ngumhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo ngemuva kokuhlolwa okugcwele kwephrofayili yezempilo yesiguli kanye nokuhlangenwe nakho kwencwadi kadokotela.
Ukuvimbela ukusetshenziswa kabi kadokotela yingane yakho kungasiza ekuvimbeleni ukulutheka okuzayo. Okwenzayo namuhla ukuqala ingxoxo nokwabelana ngolwazi nengane yakho kungaqondisa izinketho zesikhathi esizayo nokuthatha izinqumo ngayo yonke imithi. Njengoba ikhula iba ngabantu abadala, intsha yanamuhla cishe izobona okuningi ngaphezulu kwamakhompiyutha, imithi kadokotela, nezidakamizwa ezingekho emthethweni kusiko oluyizungezile, ngakho-ke badinga ukuthi ubanikeze ulwazi nokuqonda manje.
Amaqiniso ngokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kwentsha
Ucwaningo kanye nemibiko yokufa-kuveza amaqiniso aphazamisayo ngemiphumela yokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa zentsha.
Uyini umuthi ongu-1 osetshenziswa yintsha?
I- Ukuqapha Inhlolovo Yesikhathi Esizayo ka-2018 , exhaswe yi-National Institute on Drug Abuse, ibika ukuthi phakathi kwemithi kadokotela, u-3.5% wentsha ubika ukuthi usebenzisa i-Adderall, u-1.7% wentsha ubika usebenzisa i-Oxycontin, u-1.1% wentsha ubika usebenzisa i-Vicodin, kuthi u-0.8% wentsha ubike usebenzisa i-Ritalin.
Izibalo zezidakamizwa zentsha
Umthombo onokwethenjelwa kakhulu wolwazi mayelana nentsha nezidakamizwa uvela onyakeni Ukuqapha Ucwaningo Lwekusasa (MTF) yabafundi bebanga lesishiyagalombili, le-10, nele-12 lase-U.S. Ucwaningo luveza imininingwane ebalulekile ngamathrendi ekusetshenzisweni kwezidakamizwa kwentsha. Izibalo zibuyela emuva ku-1975.
Izibalo zokusebenzisa izidakamizwa zentsha 2016
Ngokuya ngocwaningo lwe-2016 MTF, nanka amaphesenti abaphenduli ababika ukuthi basebenzise le mithi elandelayo ngonyaka owedlule (izibalo zedivayisi evuthayo azange zirekhodwe).
Izibalo zokusebenzisa izidakamizwa zentsha 2017
Ngokuya ngocwaningo lwe-MTF lwango-2017, nanka amaphesenti abaphenduli ababika ukuthi basebenzise le mithi elandelayo ngonyaka owedlule.
Izibalo zokusebenzisa izidakamizwa zentsha 2018
Ngokocwaningo lwe-2018 MTF, nanka amaphesenti abaphenduli ababika ukuthi basebenzise le mithi elandelayo ngonyaka owedlule.
Amathiphu wokugcina imiyalelo iphephile ekhaya
Abazali kufanele babhekisise imithi abanayo ekhaya ukusiza ukuvikela intsha yabo.
Dala uhlu lwayo yonke imiyalo futhi ulandele ukuthi zigcwaliswa nini. Lokhu kuzokusiza uqaphele lapho umuthi ulahleka.
Bala inani lamaphilisi ebhodleleni uma usola ukuthi amanye alahlekile. Qhathanisa ingqikithi nenombolo oyinikezwe ekhemisi.
Ngemithi evame ukusetshenziswa kabi, njengamaphilisi ezinhlungu, thenga ikhabethe elingakhiqeka.
Yazi izimpawu zokusebenzisa kabi kadokotela futhi ubuke isimilo nezimpawu ezihambisana nalezi zincazelo.
Hlala engxoxweni eseduze nodokotela wengane yakho, othisha, nabanye abantu abadala empilweni yengane yakho.
Ukukhulisa intsha ukuthi isebenzise imithi ngendlela efanele
Njengoba unalezi zingxoxo, yazisa izingane zakho ukuthi zingayisebenzisa kanjani imithi ngendlela efanele futhi zihlale ziphilile:
Ukulandela izeluleko nezikhombisi-ndlela: Kubalulekile ukulandela zonke izexwayiso, iseluleko somhlinzeki, nezikhombisi-ndlela ezifakwe kudokotela. Lokhu kufaka phakathi ukuqondiswa kokuthatha imiyalo yomunye umuntu.
Ukwenqaba umuthi owonakele noma ophazamisiwe: Chaza ukuthi yini okufanele uyenze uma umuthi wabo ubonakala usonakele, uphazamisekile, noma uphelelwe yisikhathi. Bazise ukuthi kufanele balalele umqondo wabo ovamile futhi bagweme ukuthatha noma imuphi umuthi obukeka ulimele noma ungaphephile ngaphandle kokukhuluma nodokotela wabo noma usokhemisi.
Ukugcina umuthi: Intsha kufanele iqiniseke ukuthi imiyalo yayo igcinwa ingatholakali futhi iqhele ezinganeni ezisencane. Uma ukupakisha kunikezela ngemiyalo ekhethekile yokugcina, kubalulekile ukuyilandela.
Ukukhuluma ngemiphumela emibi engadingeki: Imiphumela emibi kufanele ibikwe kudokotela noma usokhemisi. Umhlinzeki anganquma ukushintsha umthamo noma alungise umuthi.
Ukwazi ukuphikisana nokusebenzisana: Imithi yokwelashwa nemithi yokuthenga ingase ihlanganyele komunye nomunye nangama-supplements asetshenziswa kakhulu.
Amalebula okufunda ngokucophelela: Intsha kufanele yazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukufunda amalebula nokufakwa kwamabhokisi.
Ukuthola izinsiza ezithembekile eziku-inthanethi: I-intanethi ineminye imininingwane emibi, kepha amasayithi athembekile njenge I-WebMD kanye ne- Umtholampilo waseMayo isayithi lingumthombo wolwazi olusemthethweni lwezempilo, kufaka phakathi imininingwane mayelana nemiyalelo.
Ukuthemba ukwesekwa kwangaphandle: Abantu abadala abathenjiwe ngomunye umthombo wolwazi ongabazali.
Ukubuza imibuzo: Izingane kufanele zikhuthazwe ukuthi zikhulume nosokhemisi wazo kanye nomhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo uma benemibuzo kadokotela.
Ngokufundisa izingane zakho ukusebenzisa imishanguzo ngokufanele, usetha umbono onempilo ngemigomo nezinye izidakamizwa impilo yabo yonke.
Ukuhlolwa kwesifo sikashukela kukhombisa izimpawu zempilo ephansi ezigulini ezi-1 kwezi-5
Lubiza malini uhlelo lwe-freestyle libre
ngokushesha nje ngemuva kwe-tylenol ungayinikeza i-motrin
yiliphi iphilisi lokulawula ukubeletha elifanele kimi ishadi
izindleko ezimaphakathi zamaphilisi okulawula ukuzalwa ngaphandle komshwalense
kungakanani ibuprofen ngosuku okuphephile
ngikhohliwe ukuthatha ama-antibiotic ami izinsuku ezimbalwa